प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडलाई अन्तरवार्ता दिँदै मन्त्रीमण्डल ठूलो बनाउनु आफ्नो बाध्यता रहेको बताएकाथिए । देशका युवाहरुले आफूबाट धेरै आश गरेको बताउँदै भट्टराईले आफ्नो छवि विग्रन सक्ने कुरामापनि आफू सचेत रहेको बताएकाथिए । शान्ती र संविधानको लागि आफूले स्याक्रिफाइस गरेको भन्दै, आफ्नो ठूलो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने कार्यको बचाउ गरेकाथिए । ठूलो मन्त्रिमण्डलको बारेमा राखिएको एक जिज्ञासामा डा. भट्टराईले सबै मन्त्रीलाई नचिन्ने बताए । भट्टराईले भने, “मलाई मन्त्री छान्ने सुविधा मलाई छैन। कति मन्त्रीलाई त म चिन्दा पनि चिन्दिन नाम पनि थाहा छैन। स‌ंयुक्त सरकारको वाध्यता हो यो।” बालकृष्ण ढुंगेलको बारेमा गरिएको कुराकानीमा भने अब सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यो मान्य हुनेबताए । दिपक भट्टराईले गर्नुभएको ट्विटहरु समेटेर हामीले यो ब्लग तयार पारेका छौँ !
भगवान ! [God #Story]
Aakar November 11, 2011
“सञ्जय ! ए सञ्जय ! आज शनिबार हो । उठेर नुहा अनी मन्दिर जा त छोरा । कति अल्छि भा’को छस् तँ आजकाल हँ ?” “ह्या आमा नकराउनु न । सुत्न पनि नदिने भन्या कस्तो मान्छे तपाईं ।” निन्द्राबाट बिउझेर सञ्जय झोक्किन्छ । “को उठ्छ एस्तो जाडोमा ? सुत्न दिनुस् न भन्या ।” “अल्छि नगर त तँ । अल्छि गरेर जाडो भाको तँलाई । म एक घण्टा अगाडि उठेर नुहाए । खोइ मरेनौ त हामी जाडोले । भनेको मान उठ खुरुक्क ।” सञ्जय सिरकले टाउको छोपेर सुतिदिन्छ । आमाको स्वर बन्द हुन्छ तर पूजाको घन्टीले उसलाई झर्को लाग्छ । ह्या ! काम छैन बिहान बिहान उठेर ... ऊ मन मनै सोच्छ । केही बेरमा उठ्छ । एउटा गिजर पनि छैन घरमा । यस्तो चिसो पानीले नुहाउनु पर्ने । हाम्रो बाउले पनि के घर बनाउनु भाको होला यस्तो । जाबो एक तले । छ्या , हेर्दा पनि घर जस्तै छैन, प्रतापको घर हेर, कति दामी छ । खप्पर पनि पाकै रहेछु मैले । नुहाउँदै सोच्छ । नुहाइ सक्दा टेबलमा चिया तयार हुन्छ । सोफामा बसेर ऊ चिया पिउन थाल्छ । ल अब मन्दिर जा त छोरा । भन्साबाट आमाको आवाज सुनिन्छ । आज उसलाई मन हुँदैन मन्दिर जाने । सोच्छ के जानु मन्दिर । किन जानु ? मैले थाहा पाए देख
Listen to Bulbul Episode-115 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Bulbul isaRadio Program (a gajal program). Thanks to BULBUL Team for bringing suchawonderful program.You can directly send your suggestion, comments & even your gajal to: bulbul[at]unn.c
काठमाडौँमा फोहोर को समस्या नयाँ होइन । अनि सहरको यही फोहोर व्यवस्थापन गर्नु महानगरपालिको लागि सँधै टाउको दुखाइ को विषय बन्दै आएको छ । अझ झन् हामी काठमाडौँवासीको प्रवृति नै यस्तो छ कि, आफ्नो घरको फोहोर सँधै अरुलाई अप्ठ्यारो गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्छौँ । काठमाडौँको बाटो दैनिकरुपमा नाप्दा बाटोमा विभिन्न किसिमका कुराहरु देख्न पाइन्छन् । बाटोमा देखिने कुराहरु कुनै रमाइला हुन्छन्, कुनै अप्रिय हुन्छन्, अनि बाटोमा देखिने केही कुराहरुले हामी मानवजातीलाई नै जिस्क्याइरहेका हुन्छन्, झस्काइरहेका हुन्छन् । अफिस जाने आउने क्रममा दशैँअघि बाटोमा यसप्रकार को सूचना देखेको थिँए । “कृपया यहाँ फोहोर फाल्न सख्त मनाही छ” , “सभ्य नागरिकको परिचय दियौँ” । एकव्यक्तिको घरसँगै रहेको पर्खालको छेउमा फोहोर फाल्ने गरिएको रहेछ । घरको पर्खालको छेवैमा फोहोर थुपारिएको थियो, अनि सायद घरधनीले हुनुपर्छ, फोहोर फालिएको स्थानलाई घेरेर, फोहोर नफाल्न आग्रह गरेको सूचना टाँसेका थिए । अस्तिको दिन (तिहार पछि) अफिसबाट घरतिर फर्किँदै थिँए । मेरो आँखा फेरि त्यही फोहोर फालिएको स्थानमा टाँसिएको सूचनामा गएर अड्कियो । फोहोर फाल्ने स
Bulbul : Episode - 114
Aakar November 02, 2011
Listen to Bulbul Episode-114 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Bulbul isaRadio Program (a gajal program). Thanks to BULBUL Team for bringing suchawonderful program.You can directly send your suggestion, comments & even your gajal to: bulbul[at]unn.c